पूर्व एमाले र माअाेवादी मिलि बनेकाे नेकपाभित्रको गुटैगुट, कसका छन् गुट ? -
पूर्व एमाले र माअाेवादी मिलि बनेकाे नेकपाभित्रको गुटैगुट, कसका छन् गुट ?
८ आश्विन २०७५, सोमबार ०८:३२ 270 पटक हेरिएको
काठमाडाैँ । पार्टी निर्णयमा शीर्ष नेताकै असन्तुष्टि देखिनु नेकपामा नौलो कुरा हुन छाडेको छ। वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको पार्टी एकता भएकै दिनदेखि वरियताको एजेन्डा उठाएको–उठायै छन्। प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पार्टी पदबाट राजीनामा नै दिनुपर्ने अवस्था आयो। उनको राजीनामा स्वीकृत हुने प्रक्रियामै पुगेन। अर्का वरिष्ठ नेता माधव नेपाल भन्दैछन्– पार्टीमा आफ्नो पक्षका नेतालाई अध्यक्ष ओलीकै कारण जिम्मेवारीमा भेदभाव गरिंदैछ।
के नेकपाभित्र गुटबन्दी हाबी छ रु आइतबार बिहान नेकपा प्रवक्ता श्रेष्ठले हात्तिवनस्थित निवासमा पार्टीका युवा–विद्यार्थीका पदाधिकारीसँग त्यसको केही खुलासा गरे। नागरिक आन्दोलनका अगुवा देवेन्द्र्रराज पाण्डेले उनलाई सुनाएका अभिव्यक्तिको प्रसंग कोट्याउँदै उनले भने, ‘नेकपाभित्र गुटसम्म ठीकै थियो, तर गिरोह नै छ भनेर नागरिक अगुवा देवेन्द्रराज पाण्डेले मलाई सुनाउनुभयो, यदि त्यस्तो गिरोह छ भने त्यसले पार्टीलाई कहाँ पुर्‍याउला रु युवा–विद्यार्थीले चिन्ता गर्नुपर्ने बेला आएको छ।, यो खबर आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा छ ।
नेकपामा कै–कसका छन् गुट रु